O buru na imuta ihe site na mmeri, i ghaghi iko. - Zig Ziglar - Kwuru Pedia
Ndụ na-ewetara anyị ahụmịhe dị iche iche. Anyị anaghị eme otú ahụ ghọta ihe kpatara ya n'azu ihe niile mere. Mana n'amaghị ama, ahụmịhe ndị a niile na-enye aka n'ụzọ ụfọdụ iji dozie ụdị mmadụ anyị bụ n'ezie. Ahụmahụ ụfọdụ na-enye anyị ọ joyụ, ụfọdụ na-enye anyị iru uju.
N'ime ihe ndị a niile anyị na-etolite ma ndụ anyị na-abawanye ụba n'ụzọ nke ha. O nwere ike ịdị anyị ka enweghị enyemaka n’oge ihe isi ike anyị, mana anyị kwesịrị iwere ha ka ha bụrụ oge na-ele anya maka oge ọma. Ọnọdụ ebe obibi na-enye anyị ike iche ihe anyị nwere ike ichetụ n'echiche.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-amụta mgbe mmadụ chere oge ihe isi ike ihu ma ọ bụ daa. Ọ na-akuziri anyị iguzogide ihe ma na-emekwa ka anyị ghọta nke ọma ihe anyị nwere ike ime. Anyị ghọtara na ihe mgbu ahụ na-agwụ ike mana anyị makwaara na naanị nhọrọ bụ imeri.
Oge ndị a siri ike na-agwa anyị ndị anyị bụ ezigbo ndị enyi. Ọ na-enyere anyị aka ịmepụta agbụ ndị na-adịgide ndụ. A na-ekwu na ndị enyi weghaara ọnọdụ ọjọọ jikọtara ibe ha nke ọma n'ihi na ha na-ebuso oke mmiri agha. N'ihi ya, enwere ọtụtụ ihe anyị na-amụta, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ mgbe anyị chere oge ndị siri ike ihu ma ọ bụ merie anyị.
Yabụ echekwala na ị fufuru n'ezie mgbe e meriri gị, n'ihi na ị mụtala nkuzi gị ụzọ siri ike ọ ga-anọnyere gị ruo mgbe ebighi ebi. I nwetala amamihe ma nwee merie merie na-eme ka ị gbasie ike karịa ka ị bụ.
Best Short Quotes Mgbe
Nri Mmuo a Mụtara
Nkwupụta Okwu dị mkpụmkpụ
Egwuregwu Ebumnuche Egwuregwu
Egwuregwu na-ekwu okwu
Quotes Short Short siri ike